I-chalet ebanzi kwaye ekhululekile ngasechibini
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguPierre
I-Chalet ibekwe kumda weLake Huit Milles eSainte-Irène, imizuzu eli-10 ukusuka e-Amqui okanye eVal D'Irène okanye kwiindlela ezihamba ngekhephu. Ngokutsho kwabahambi, i-chalet ene-rustic kwaye ibonelela ngezinto zanamhlanje: ikhitshi elixhotyiswe kakuhle kunye negumbi lokuhlambela elineshawa yonyango kunye nemigangatho eshushu. Ichibi elifudumala ngokukhawuleza ehlotyeni, apho kulungile ukuqubha okanye i-kayak.
Ngamafutshane, indawo enoxolo apho siphupha ngokumisa ixesha, igqibelele kakhulu!
Indlu endala yeplanga apho kongezwe isihlomelo kwimigangatho emibini nto leyo eyenza ukuba indawo yokulala ibe banzi kakhulu.
Uhlaziyo lwamva nje luhlaziye ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela ukwenza i-chalet ikhululeke ngakumbi.
CITQ # 295866
4.95 · Izimvo eziyi-261
Indawo apho i-chalet ikhona khona inoxolo kakhulu. Ekuphakameni, ikwinqanaba elithintela ingxolo ebangelwa yindlela yelizwe okanye oololiwe. Ukongeza, akukho zikhephe zemoto echibini. Ezona zandi zikhwazayo ziphuma kumalowuni amabini ahlala kwindlwane nyaka ngamnye. Xa kufika ukwindla, unokuva isandi samagqabi xa esiwa emithini!
Ndihlala ndifumaneka ngalo lonke ixesha ukuphendula imibuzo ephakamayo ngexesha lokuhlala kwakho okanye ukukukhokela kwimisebenzi yakho yabakhenkethi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sainte-Irène